किंग निर्माता जयन भन्छन्, “फिल्म निर्माता होईन् म राम्रो मेकर बन्न चाहन्छु” | THE CINEMA TIMES
ArticlesInterview Author:	The Cinema Times - Jan 3, 2017
फिल्म किंगका निर्माता जयन श्रेष्ठ जसको पारिवारिक पृष्ठभुमि नै नेपाली सिनेमासंग जोडिएको छ । उनका बाबु जगन श्रेष्ठले कसम र दाग नामक दुई सिनेमा निर्माण गरेका थिए ।
सानो छदा आफ्नो बाबुले बनाउने फिल्ममा उनि समेत नजिक बाट संलग्न हुन्थे । फिल्मको छयांकन देखी हरेक काममा उनि पनि सहभागी हुन्थे र नजिकबाट हरेक कार्यको अवलोकन गर्थे । पछि उनका बुबाले कार्य व्यस्थताका कारण फिल्ममा समय दिन सकेनन् । उनको परिवार संगै लन्डनमै बस्न थाले र उतै पढे पनि।
झन्डै एक दशक उता पढाई पुरा गरि नेपाली फिल्ममा केहि गर्छु भनी उनि नेपाल आए । हुनत उनि उतै बसेर राम्रो पैसा समेत कमाउन सक्थे तर नेपालमा फिल्म बनाउछु नै भनी आफ्ना बाबु र परिवारसंग सल्लाह गरेर शबिर श्रेष्ठको निर्देशनमा फिल्म किंग निर्माण गरे ।
सानै देखी फिल्मी परिवारमा भएका कारण आफु फिल्म निर्माणमा आकर्षित भएको उनि बताउछन । भन्छन,” म फिल्मी किरो हु, मैले हजारौ फिल्म हेरेको छु र अझै पनि मसंग हजारौ फिल्मका सिडी/डिभिडी छन् । सानै देखी फिल्म बुझे र बिश्वको फिल्म हेरे । अनि नेपालको फिल्मको विकास पनि बुझे र अहिले फिल्म बनाए ।”
उनले निर्माण गरेको फिल्म किंग आगामी पुष २८ गतेबाट प्रर्दशनमा आउदैछ । फिल्ममा देशका नाम चलेका कलाकारहरुको अभिनय पनि छ, गीत तथा ट्रेलर रिलिजबाट फिल्मको चर्चा पनि उत्तिकै छ । एक्सन सुपरस्टार निखिल उप्रेती, नाम चलेका अर्का ह्यान्डसम हंक हिरो अनुप बिक्रम शाही, अभिनेत्री बेनिशा हमाल लगायत फिल्मका मुख्य पात्र हुन् । फिल्म लुटेरा पछी निखिलको फिल्म किंग रिलिज हुदैछ छ, यसकारण पनि दर्शकमाझ फिल्म प्रतिक्षित छ ।
यसो त जयन आफु नाम कमाउन मात्र निर्माता भएर नआएको र निर्माता भन्दा पनि राम्रो स्तरीय फिल्म बनाउने मेकर आफुलाई बनाउने सोच रहेको बताउछन । सबै व्यक्ति आफुमा किंग रहेको र सबैले आफु भित्रको किंगपनलाई चिन्न सके जीवनमा केहि गर्न सक्ने पनि उनि बताउछन, उनको फिल्मले पनि यस्तै संदेश दिने उनको भनाई छ ।
”मलाई फिल्म बनाएर चिनिनु छैन, धेरै कमाउनु पनि छैन तर यो मेरो बिजनेश हो नाफा भने हुनुपर्छ । म फलानो निर्माता हु भन्दानी मलाई त राम्रो फिल्म उद्धयोगलाई दिनु छ र पैसा हालेर फिल्म बनाउने निर्माता भन्दा पनि राम्रो मेकर बन्नुछ ।”
प्रस्तुति: बाबु सुरेश डिसी
Tags:anup bikram shahi, babu surace dc article, bensiha hamal, jayan shrestha, nepali movie king by jayan shrestha, Nikhil Upreti, Shabir Shrestha, surace dulal journalist
किंग निर्माता जयन भन्छन्, “फिल्म निर्माता होईन् म राम्रो मेकर बन्न चाहन्छु”0out of5based on0ratings.0user reviews.
‘तिमी म:म खाँदै म चाउमिन बजाउँदै’, हिट्लर लिरिकल भिडियो हेर्नुहोस्
Nepal	Dec 29, 2017
‘आमैले भन्थ्ये’को रिमेक !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – सिनेमा ‘झमक बहादुर’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘आमैले…